Sida looga qayb galo shirka saamilayda casriga ah ee Apple 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida looga qayb galo shirka saamilayda farsamada ee Apple 2021
Sida looga qayb galo shirka saamilayda farsamada ee Apple 2021
Shirka saamilayda sanadlaha ah ee Apple kama dhici doono xarunta Apple Park sanadkan sida caadiga ah. Iyada oo COVID-19 masiibada uu sii jiro, waxay noqon doontaa dhacdo-kaliya sanadka 2021. Tani waxay u badan tahay inay kordhiso ka qaybgalka kulanka Febraayo 23. Oo haddii aad leedahay saamiyada AAPL, waad ka qaybgeli kartaa.
Waa tan waxaad u baahan tahay inaad sameyso.
Digniin: Kahor intaadan bilaabin, waa inaad lahaatay saamiyada Apple laga bilaabo Disembar 28, 2020, si aad uga qayb qaadato. Ma qaadan kartid hal saami Isniinta, la soco kulanka Talaadada, ka dibna iibiso saamiyada Arbacada.
Sidoo kale, waxa suurtogal ah inaad hore u siisay xuquuqaha wakiilkaaga si uu ugu codeeyo magacaaga adigoon ogayn. Haddii ay sidaas tahay, waxaa laga yaabaa inaad nasiib u yeelan doonto ka qaybgalka.
Sida si dhab ah looga qayb galo shirka sanadlaha ah ee saamilayda Apple 2021
Tani waa markii ugu horeysay ee Apple ay qabato kulan saamiley oo online ah, sidaas darteed waxay la socotay degel dhinac saddexaad ah oo ay samaysay Broadridge Financial Solutions si ay u martigeliso dhacdada. Saamilaydu waxay u baahan doonaan inay tagaan www.virtualshareholdermeeting.com/AAPL2021 Talaadada, Feebarwari 23, saacada 9ka subaxnimo ee Baasifiga si ay gabi ahaanba uga qaybgalaan.
Galitaanka shirka waxay u baahan tahay nambar kontorool oo gaar ah kaas oo sidoo kale ogolaan doona cod bixinta. Waxay ahayd inaad ka heshid qoraal ku saabsan arrintan dullaalkaaga, bangigaaga ama urur kasta oo haysta saamiyadaada Apple. Haddii aadan samayn, waxaad haysataa dhowr maalmood oo aad la xiriirto.
Ha filanin muujinta waaweyn
Inkasta oo ay dhacdadani dhacdo usbuucan, waxaa jiray war yar oo arrintan ku saabsan. Guud ahaan, maamulaha Apple Tim Cook iyo maamulayaasha kale ee sare waxay isticmaalaan shirka saamilayda sannadlaha ah si ay uga gudbaan alaabada la sii daayay sannadkii hore, sida iPhones iyo Macs ee ugu dambeeyay.
Mararka qaarkood, maalgashadayaasha firfircoon waxay isku dayaan inay ku qanciyaan saamilayda kale inay Apple u beddelaan si uun. Horey, dadka u dhaqdhaqaaqa ayaa soo jeediyay soo-saare iPhone-ka inuu joojiyo wadashaqeynta uu la leeyahay dowladda Shiinaha. Waxaa jiray isku dayo hore oo lagu doonayay in Apple lagu joojiyo dadaallada lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada. Si kastaba ha ahaatee, haddii wax muran ahi uu yaallo meesha laga soo galo Shirka Sannadlaha ah ee Saamileyda ee Apple 2021, weli warka lama samayn.
Weli, su'aalaha saamilayda ayaa weydiiya maamulayaasha Apple ka dib bandhigga inta badan waa qaybta ugu xiisaha badan kulanka. Ma aha in Cook iyo Co. ay u badan tahay inay sameeyaan wax ogeysiis ah oo yaab leh. Qof ayaa hubaal ah inuu wax ka weydiiyo gaariga Apple ama muraayadaha Apple oo si xushmad leh loogu sheego nooc ka mid ah "faallo ma leh."
Haddii aadan ahayn saamile AAPL, kuma maqnaan doontid. Cult of Mac ayaa ka warbixin doona wixii warar ah ee kasoo kordha dhacdada Talaadada.
Sida loo damiyo Qufulka firfircoonida marka aad iibinayso qalabkaaga Apple
Dib u eegista isku xigta: Ku dar Animations Cinematic Scroll WordPress